“အတွေးစလေးတွေ”: မေတ္တာသွန်းဖြိုး . . . ပန်းပျိုးစေ . . .
Posted by Han Kyi at 4:56:00 am
ခလေးတွေကိုဆိုဆုံးမဖို့ ကလွယ်မယောင်နဲ့ ခက်ခဲတယ်နော်...
ဆြာဟန်ရဲ့ သဘောထားကို ဆွေလေးမွန် လဲ သဘာတူတယ်....တစ်ချို့ကလေးတွေဆို ငယ်ငယ်ကမိဘကိုလဲချစ်တယ် လိမ္မာတယ်..ဒါပေမယ့်မိဘက ဆြာဟန်ပြော သလိုပါပဲ..တစ်ချက်မှ အကောင်းမမြင်တော့ ကလေးက ရွှဲ့ရင်းရွှဲ့ရင်း အခြေခံပညာ အထက်တန်းလေးတောင် မအောင်တော့ဘူး..
ဆွေလေးမွန်ကတော့ ဘေးထိုင်ကြည့်ရတဲ့သူဆိုတော့ ဘာမှကို မပြောသာပါဘူး..သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံ လွှတ်ထားရတော့တာပါပဲ
ခနိုးခနဲ့ ဆိုကဲ့ရဲ့လည်း မဖဲ့မစောင်း ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို စိတ်ကောင်းနဲ့ယှဉ် ရှေးရှုနှင်လော့...တဲ့ ဟုတ်တာပေါ့ဆရာ
31 October 2013 at 03:07
ဆရာဟန် ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သူလိုတာသိမှ
ကိုယ်လိုတာရမယ် ဆိုတာလေးက တကယ်ကို မှဆ်သားသင့်တာလေးပါ။
Thanks for suchawonderful post. Hope to read more about Child Psychology (ကလေးစိတ်ပညာ) with your experience.
ဒီမှာဆုိုမိဘတွေကရုိုက်လို့ မရဘူး။ ရုိုက်ရင်ခလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဌာန ကတရားစွဲတယ်။
အောင်မပဲ့ပြင်နုိုင်ပြန်ဘူး။ (သူတို့ အတွေးက၁၀၀% မမှန်သေးဘူးလေ။)အဲဒီကြားထဲကနေထိန်းကျောင်း ပဲ့ပြင်ရတာလည်းတိမ်မယောင်နဲ့ နက် လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်ပဲနော်ဆြာဟန်။
ဆြာဟန်ပြောတဲ့သူတုို့ ကိုအသိအမှတ်ပြုပေးဖုို့ သူတို့ လုပ်ရပ်ကုိုချီးမွမ်းပေးဖုို့ တွေကတော့တော်တော်
မိဘ ဆရာ နှစ်ဖြာစလုံး သိသင့် သိထိုက်
ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်သော စာပါဗျာ ။
နုနယ်ငယ်ရွယ်သော ကာလ တစ်လျှောက်လုံး
အငေါက်ခံ အရိုက်ခံ လာကြရတော့
သူတို့လေးတွေ ဉာဏ်ရည်ဟာ ကွန့်ဖြာနိုင်စွမ်း
မရှိရှာတော့ဘူး ။ မိဘ ဆရာ များ သတိထားနိုင်ကြပါစေဗျာ ။
3 November 2013 at 04:11
ကိုယ်တိုင်..စာသင်လာတာကြာလာတော့..ဦးဟန်ကြည်ပြောတာလက်ခံတယ်။ကလေးတွေကဆိုးတယ်လို့ပြောရင် ပိုဆိုးတယ်။သူတို့ကိုလိမ်မာတယ်.လုပ်နိုင်တယ်လို့သာပြောပေး.သူတို့ကအများနည်းတူ ကြိုးစားလာတာတွေ့ရတယ်။
မှန်လိုက်လေ ဆရာဟန်ရယ် ... ကျမလဲ ကလေးတွေကို စာသင်ရတော့မှ မိဘနဲ့ သားသမီး၊ ဆရာနဲ့ ကျောင်းသားကြားက ဆက်ဆံရေးတွေကို သေချာ လေ့လာဖြစ်တယ်။
ကလေးကို စာတတ်စေချင်လွန်းပြီး လောဘကြီးလွန်းတဲ့ မိဘ၊ နေရာတကာ လက်ပါလာပြီး ဒေါသကြီးလွန်းတဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်မိတယ် ဆရာဟန်ရေ ... ။ ကိုယ့်သားသမီးကို လူတိုင်း အတော်ဆုံး အတတ်ဆုံး ဖြစ်စေချင်တာ မိဘတိုင်းရဲ့ စေတနာ ဆိုပေမဲ့ စေတနာတွေလွဲမှားတဲ့အခါ ကိုယ့်ကလေးပဲ ထိခိုက်မှာကို မသိကြဘူး။ မိဘတွေကို ဆရာဟန့် ဆောင်းပါးလေး ပရင့်ထုတ်ပြီး ပေးဖတ်ချင်မိသား။ :)
မိဘတိုင်းဟာ တစ်ချိန်က သားသမီးတွေမို့ ကိုယ့်ရဲ့ ငယ်ဘ၀ကိုမြင်ယောင်ပြီး သားသမီးတွေအပေါ် ပြုမူဆက်ဆံသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဆရာဟန်ရယ်...
ချွင်းချက်အနေနဲ့ ခေတ်နဲ့တော့ လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိဘို့လိုတာပေါ့ကွယ်...
အရေးအသားကောင်းတဲ့ ဆရာဟန်ရဲ့ စာတွေမဖတ်ရတာ ကြာပေါ့... ပို့စ်ဟောင်းတွေ မွှေနှောက်သွားတယ်..
နောက်ဆုံးပ်ိတ်သုံးသပ်စာသားလေးကိုကြိုက် တယ်ဆြာ မျိုးဆက်တွေတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ျေတာ့ အကြောက်တရားတွေပါးလွှာသွားမှဖြစ်မယ်ဗျို့